Golaha ammaanka oo u digay Kuuriyada waqooyi - BBC News Somali
Golaha ammaanka oo u digay Kuuriyada waqooyi
30 Agoosto 2017
Image caption Gantaalka Kuuriyada waqooyi ku ridday waqooyiga Japan
Waxaa hadda cadaatay in dhammaan xubnaha golaha ammaanka ay rumaysan yihiin in tijaabadda gantaalada ee ay samaynayso Kuuriyada Waqooyi ay tahay arin dhibaatadeeda leh, loona baahan yahay in wax laga qabto.
Warka kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si cad loogu sheegay in falalka Pyongyang ay yihiin kuwo khatar ah, isla markaana carqaladeynaya xasiloonida gobolka iyo weliba tan caalamka oo dhan.
Maraykanka ayaa soo dhaweeyay jawaabta midaysan ee kasoo baxday Golaha Ammaanka.
Haseyeeshee xubnuhu waxay ku kala argti duwan yahay tallaabada xigta ee laga qaadayo Kuuriyada Waqooyi. Maraykanka ayaa doonaya in cunaqabateyn dheeraad ah ay Qaramada Midoobay saarto dalkaasi, gaar ahaan shidaalka uu dalkaasi soo dhoofsado iyo in la adkeeyo qaabka difaaca gantaaladda ee gobolkaasi.
Ruushka iyo Shiinaha ayaa dhaliilay cunaqabateynta uu Maraykanka dhawaan kusoo rogay Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay tilmaameen in dhaqdhaqaaqa milateri ee uu dalkaasi ka wado gobolka ay qeyb ka tahay xiisadda taagan. Labadan dal ayaa ku baaqay in khilaafkan wadahadal lagu dhameeyo.